Ogaadeenya oo Tubtii Xoriyadda Cagta saartay.
Marka hore waxaan salaamayaa umadda Soomaaliyeed ee Soomaalinimadda Jecel marwalbana jecel in ay haybadii & sharaftii Soomaaliya soo noqoto.
Waxaan halkan ku diyaarinayaa Qormo aan siiya cinwaanka ah Ogaadeenya oo Tubtii Xoriyadda Cagta saartay, markaan saas leyahay waxaan doonayaa in aan sababta keentay u ifiyo umadda Soomaaliyeed ee jecel ama u ooman in ay helaan walaalahooda ku hoos jira Gumaysiga in ay aayahooda ka tashadaan.
Qarni walba wanagiisa & xumaantiisa ayuu wataa waxaan ku aqliyay sanay dhamaan umadda Soomaaliyeed oo hal cod ah ama hal ujeedo ah wadda huwan waana midi keentay in ay labadii dawladood ee xaqa u yeeshay in ay Gumaysigii haystay ka hoosbaxaan maalin midoobaan oo ay yeeshaan hal dawlad ah sida Waqooyi Galbeed & Koonfur Soomaaliya.
Waxay umadda Soomaaliyeed markaas raadinaysay ama ay u oomanaayeen in ay Soomaali meel ay joogtaba aynan sharaf ku noolaanaynin inta uu walaalkood Gumaysi ku jiro nolashiisuna aynan hagaagaynin ilaa uu ka saaro dhibatadda walaakiisa ku hadhay gumaysiga oo ka hoos baxayo cadawga ku habsaday ee dhulkiisa qabsaday.
Xiligii hore Soomaalidu waxay arki jireen in ay hal cadaw leeyihiin kaas oo ah midka Xabashida oo dhulsoomaaliyeed mudo dheer xoog kuhaysatay walina haysata.
Aan u soo daadago ujeedada qoraalkayga. Umad markay dhibaato qabsato waxay kaga bixi kartaa oo kali ah in ay isku tashato oo naf & maalba ay dhigaan si ay u helaan waxay higsanayaan oo ah xoriyad. Shacabka Ogaadeenya sidaan horaanba qormadii tan ka horaysay aan ku cabiray waxay mudoo dheer geed gaaban & mid dheerba u fuuleen in ay helaan waxa ka maqan oo ah in ay dadkoodo ayagu u tashadaan taas oo manta inoo soo udgaysa ama soo carfaysa Xoriyadii waxaana daliil aan ka dhiganayaa dhowr arimood.
Dadka Soomaaliyeed ee Ogaadeenya oo ku baraarugay in ay xaqooda raadsadaan iskana celiyaan cadawga qabiilka ku samaysan ee dhulkooda hooyo haysata.
Caalamka oo maanta ilgaar ah ku fiirinaya xaaladda xun ee ka taagan Ogaadeenya & siduu aduunku u iloobay umadaas qarniyaalka aduunka ka danbeeya oo aadan Ogaadeenya ka helaynin waxa daruuriga ah ee uu bani aadmku u baahan yahay.
Itoobiya oo qiraysa in ay halkaas (Ogaadeenya) ka jirto quwad aan la loodin Karin in wadda hadal lagu dayo moyaanee taas oon oganahay, Hadalkii Melez ee ahaa ONLF waan la hadlaya gobwalba & meelwaba ooy doonaan iyagu taas oo Melez ay ka keentay saraakiisha maalin & Habeenba ciida Ogaadeenya ku dhimanaya Wayaanaha soo doolay ee doonaya in uu shacabka gumaysto oo kali ah.
Intii saluuganayd ama u arkaysay in uu ururkan yahay urur ay dadgaar ah samaysteen oo xaqiiqadii fahantay sida umaduu Soomaaliyeed ee xadka lawadaagi jiray Oromada markii dhulkodii lagu daray dhulka Oramada oo ay maanta kamidka yihiin dhulka Oramada ayga oo xaqiiqada fahmay in ay Itoobiya doonayso dhulbalaadhsi ayada oo marwalba ka xaglisa umadda Soomaaliyeed.
Dadkii Soomaaliyeed ee aan walaalaha ahayn isku dantana ahayn oo in badan oo kamida ay fahmeen dhibaatada ay Itoobiya ku hayso dhamaan shacabka Soomaaliyeed ama hajoogo Soomaalida xorta ah ama Ogaadeenya ha jogee, waana mida keentay in maanta ONLF meel walba laga soo dhaweeyo oo waxay rabaan lagu siiyo.
Mudaaharaadyo bilaabmay oon horaan la arki jirin sida Mudaaharaadkii balaadhnaa ee ay Jaaliyadda Soomaaliyeed & Midda Ogaadeenya ay ku dhigeen 29/11/2005 taas ay ka hordhigeen Baarlamaanka Afrika ayaga oo halkaas qiiro ku muujiya & sida ay uga go�an tahay in ay xaqooda helaan waxaana kamid ahaa gulihii ka soo baxay.
Dadkii mudaaharaaday oo codkooda gaadh siiyay Caalamka waxaana TV wadankaas & Joornaalada ka soo baxa aad uga hadlayeen waxay Ogaadeenya tahay waxaana laga waraysatay qaar kamida MP yadii Baarlamaanka halka ay qireen in ay dhibaato ka jirto Ogaadeenya loona baahan yahay in ilgaar ah lagu fiiriyo.
Jaaliyada Ogaadeenya ee Caalamka oo maalin qudha ah mudaaharaad kaas oo kale ah ka dhigay Caalamka Sida Urub, Amerika, Australia,kenya iwm waxayna taas ku tusinayaa sida ay dadku u fahmeen xaqooda mudadda laduudsinaya.
Guddaha Ogaadeenya oo ay kacdoon shacab ka jirto taas oo calaamadihii kacdoonka qaar kamida la arkay sida in ay shacabkii soo istaagaan mayeelayno oo aynan horaan dhihi jirin waana mida keenaysa in Tuulooyinkii ay u dhasheen dab la qabadsiiyo taas oo ay Ciidanka Itoobiya ula jeedaan ha cabsadaan lakiin ay keentay in dadkii oo dhan in ay isu rogaan in ay yihiin ONLF waana mida ay markii ay ciidanka Itoobiye ee ka howlgala Magaaladda Q/Dahare intay soo shiriyeen dhaman dadkii halkaa daganaa ayay ku dheheen waxaad tihiin dhamaantiin ONLF oo waan ognahay anaga unbaad been noo seegaysaan.
Hadaba Akhritoow in taas oo dhan miyayna ku tusinaynin in ay Tubtii Xoriyadda Cagta saartay Ogaadeenya? Waa jawaab u taala akhristaha.
Talalo ku socota dadka dulaman ee gumaysiga ku jira & Shacabka Soomaaliyeed ee xorta ah.
Dhibaatadu markay kobocda ama ay isdul fuusho heer waxay gaadhaysaa uu qofku rajo beelo oo ay u muuqto in uusan waxba ka qaban Karin hadii aad fiiriso qowmidda ay Ogaadeenya la dagaalamayso waxaad arkaysaa in uu kuba rajo tiro qofka Soomaaliyeed eed ka filaysay in uu mooraalka kuu dhiso oo uu ku dhoho waad ka guulaysan ee halkaa kasii wad halka ay ku dhahayaan shacabka dulmay ma Itoobiyaad iska celin kartaa & erayo lamid ah taas waxaa og qofka kunool Ogaadeenya in ay Itoobiya ku ladi la dahay ama ay ku raaxaysan la dahay dagaalka ka socda Ogaadeenya waxaana daliil kuu ah 94 ayuu dagaalku bilaabmay ilaa hadana wuu socdaa may qaqabato haday yihiin koox ama wax yar waxaan shaki ku jirin in uu dagaalku aad u balaadhan yahay Itoobiyana ay ogtahay.
Hadba taladaydu waxay tahay Xoriyadda inoo muuqata waa in aan sidii aan ku hanan lahayn aan falankeeda galaa khiyaaligana ka baxno oo aan wacyigalin balaadhan abuurno Dawaladan dhalan doontana aan u diyaar garoowno, hadii aan diyaar nahay way hagaagi. Dhamaan shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba waxaan ku boorin lahaa in aygarab istaagaan walaalohooda u taagan in ay ka hoosbaxaan gumaysiga qayrkood kareebay ee u diidan in ay noolaadaan. Halkaas maantana ha inoo joogto.
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 10, 2005